Translation kaxayn karo baabuurta si aad site
September 19, 2009 by dalabyo 4 Comments
Waxaan helnay warbixin (iyo sawir fiican) ka Mike Jan ka guuldarro iPhone goobta.
Boodi gaadiidka Bash.ch ka dib markii filter transposh rakibi
Transposh ujeedadeedu tahay in ka badan site badan ay heli karaan dadka kale, kuwaas oo si dabiici ah waxaa ka mid ah matoorada search. Taa soo iyana saamaxaya kuwa isticmaala in ka badan si aad u hesho si aad goobta iyo aad u ogaato content (xitaa haddii markii hore taasna waxaa lagu qoray luqad ma ay garan karaan). Boggan waxa uu u adeegaa sida tusaale kaamil ah, asal ahaan ku qoran German, markii ay ka kooban weyn noqday turjumay (oo darteed dadkii ka badan la heli karaa) ay gaari cirka isku shareeray 😉
Waxaan soo dhoweyneynaa in ay dadka kale la wadaagaan sheekooyinka iyaga u gaar ah oo ku saabsan comments to this post, in aad la kulantay guul la mid ah? Waxba at dhan? Maxay aad dareento weli ka maqan? Waxaan mar walba ku faraxsanahay in aan maqlo.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: THIS
Wixii Screenshot waa i dhihi waxaan kuugu dari Site kasta oo lagu tarjumay oo dhan matoorada raadinta sida
Sida loo hagaajiyo Traffic sida badan?
* Khasnado Site kasta (sababtoo ah search-matoorada ma jecla in ay sugto content).
* Ku dar turjumaad walba oo aad u baahan tahay in matoorada raadinta.
* Sug ah 6-10 Maalinta ee Indexing, oo kale 4-5 Maalmaha natiijada search engine
Maanta isku dayay. Plugin Aad u fiican. Thanks badan oo !
October 7, 2009 at 12:38 at the
Tani waa plugin fiican laakiin waxaan su'aal qabto. Marka post a lagu turjumay aanu nuqul ka turjumay boostada aad ku kaydsan goobta?
Waxaan la isticmaalayo Tarjumaha Global oo kaydiya oo dhan turjumaadaha oo iyaga ka dhigi indexable by Google.
Waxaan wax badan oo ka mid ah gaadiidka helay dadka raadinaya keywords oo ku qoran luqado iyaga u gaar ah.
Asal ahaan haa, turjumidda waxaa ku kaydsan goobta iyo waa indexable google (afaik)
run ahaantii, waa adkeeysi badan in isbedel qoraalka iyo comments ka badan plugins kale anigu waxaan ogahay